ဆိုးလ်ရှားကိုထုတ်ပယ်ပါက ယူနိုက်တက်တို့လျော်ကြေးဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ ? - UMN
ဆိုးလ်ရှားကိုထုတ်ပယ်ပါက ယူနိုက်တက်တို့လျော်ကြေးဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ ?
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ရလဒ်တွေဆိုးရွားနေတဲ့ နည်းပြအိုလီဂန်နာဆိုးလ်ရှားကို ထုတ်ပယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပေါင် ၇ သန်းဝန်းကျင် လျော်ကြေးအနေနဲ့ ပေးချေရလိမ့်မယ်လို့ Metro သတင်းဌာန ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားဟာ ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ရာသီပြည့်ကိုင်တွယ်တဲ့ရာသီအစမှာပဲ ဆိုးရွားတဲ့ရာသီအစကို ရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲစဉ် ၈ ပွဲမှာ ၂ ပွဲသာ အနိုင်ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ဆက်ရှိနေဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က နယူးကာဆယ်အသင်းကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ နယူးကာဆယ်ဂိုးပေါက်ကို ၃ ကြိမ်သာ ကန်သွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အဆိုးဆုံးရာသီအစဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဆိုးလ်ရှားဟာ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကစားရမယ့် လီဗာပူးနဲ့ပွဲစဉ်မှာ မရှုမလှရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံရမှာကို စိုးရိမ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယူနိုက်တက် CEO အက်ဒ်ဝုဒ်ဝဒ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာ အသင်းရဲ့ စံချိန်တင်ဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်မှု ပေါင် ၆၂၇ သန်းရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ယင်းပမာဏဟာ နည်းပြမော်ရင်ဟိုကို ထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပေးချေခဲ့ရတဲ့ ပေါင် ၁၉.၆ သန်း ပါဝင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာ တစ်နှစ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၆ သန်း ရရှိနေသူဖြစ်ပြီး နည်းပြမော်ရင်ဟိုရဲ့ တစ်နှစ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၁၅ သန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် ၂ ဆကျော် နည်းပါးပြီး ရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဆိုးလ်ရှားကို နည်းပြရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၆ သန်းကျော်ဝန်းကျင် ပေးချေရမယ်လို့ သိရပြီး ဆိုးလ်ရှားသာ ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံရရင် ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရဲ့လက်ထောက်ဟောင်း မိုက်ဖီလန်လည်း ဆိုးလ်ရှားနဲ့အတူ နည်းပြအဖွဲ့ကနေ လိုက်ထွက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခြားနည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ကားရစ်၊ ကီရန်မက်ကန်နာတို့လည်း နည်းပြအဖွဲ့ဝင်ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံရမလား၊ ဆက်လက်ရှိနေဦးမလားဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ရလဒျတှဆေိုးရှားနတေဲ့ နညျးပွအိုလီဂနျနာဆိုးလျရှားကို ထုတျပယျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့မယျဆိုရငျ ပေါငျ ၇ သနျးဝနျးကငျြ လြျောကွေးအနနေဲ့ ပေးခရြေလိမျ့မယျလို့ Metro သတငျးဌာန ရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ သိရပါတယျ။
ဆိုးလျရှားဟာ ပထမဆုံးပှဲဦးထှကျရာသီပွညျ့ကိုငျတှယျတဲ့ရာသီအစမှာပဲ ဆိုးရှားတဲ့ရာသီအစကို ရငျဆိုငျနရေသူဖွဈပွီး ပရီးမီးယားလိဂျအဖှငျ့ပှဲစဉျ ၈ ပှဲမှာ ၂ ပှဲသာ အနိုငျရရှိအောငျ စှမျးဆောငျထားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အိုးထရကျဖို့ဒျမှာ ဆကျရှိနဖေို့အတှကျ တိုကျပှဲဝငျနသေူဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့တနင်ျဂနှနေကေ့ နယူးကာဆယျအသငျးကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ နယူးကာဆယျဂိုးပေါကျကို ၃ ကွိမျသာ ကနျသှငျးနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ နှဈပေါငျး ၃၀ အတှငျး အဆိုးဆုံးရာသီအစဖွဈခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ဆိုးလျရှားဟာ အောကျတိုဘာလ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ ကစားရမယျ့ လီဗာပူးနဲ့ပှဲစဉျမှာ မရှုမလှရှုံးနိမျ့ခဲ့မယျဆိုရငျ ရာထူးကနေ ထုတျပယျခံရမှာကို စိုးရိမျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ CEO အကျဒျဝုဒျဝဒျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့စကျတငျဘာလမှာ အသငျးရဲ့ စံခြိနျတငျဝငျငှပေိုငျဆိုငျမှု ပေါငျ ၆၂၇ သနျးရှိကွောငျး ကွညောခဲ့ပွီး ယငျးပမာဏဟာ နညျးပွမျောရငျဟိုကို ထုတျပယျခဲ့တဲ့အတှကျ ပေးခခြေဲ့ရတဲ့ ပေါငျ ၁၉.၆ သနျး ပါဝငျပွီးဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဆိုးလျရှားဟာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးမှာ တဈနှဈလုပျခလစာ ပေါငျ ၆ သနျး ရရှိနသေူဖွဈပွီး နညျးပွမျောရငျဟိုရဲ့ တဈနှဈလုပျခလစာ ပေါငျ ၁၅ သနျးနဲ့ နှိုငျးယှဉျမယျဆိုရငျ ၂ ဆကြျော နညျးပါးပွီး ရရှိနသေူဖွဈပါတယျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဆိုးလျရှားကို နညျးပွရာထူးကနေ ထုတျပယျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျမယျဆိုရငျတော့ တဈနှဈလုပျခလစာ ပေါငျ ၆ သနျးကြျောဝနျးကငျြ ပေးခရြေမယျလို့ သိရပွီး ဆိုးလျရှားသာ ရာထူးကနေ ထုတျပယျခံရရငျ ဆာအဲလကျဈဖာဂူဆနျရဲ့လကျထောကျဟောငျး မိုကျဖီလနျလညျး ဆိုးလျရှားနဲ့အတူ နညျးပွအဖှဲ့ကနေ လိုကျထှကျမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခွားနညျးပွအဖှဲ့ဝငျတှဖွေဈတဲ့ မိုကျကယျကားရဈ၊ ကီရနျမကျကနျနာတို့လညျး နညျးပွအဖှဲ့ဝငျရာထူးကနေ ထုတျပယျခံရမလား၊ ဆကျလကျရှိနဦေးမလားဆိုတာကိုတော့ စောငျ့ကွညျ့သှားရမှာဖွဈပါတယျ။
Previous Article legend of football ဆုရပြိုင်ဘက်ဟောင်းကြီး အာဆင်ဝင်ဂါးကို ဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့ ဆာအဲလက်စ်
Next Article ဒီရာသီယူနိုက်တက်နဲ့ပတ်သတ်လို့ ၀န်ခံမှုတခုပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ကွင်းလယ်လူ မာတာ